Madaxweynaha Somaliland: Waar xanuunsan maayo, dhegna laygama hayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa maanta la hadlay shacabka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo, wuxuuna Khudbadiisa sii mariyey warbaahinta:
Bismillaahi Raxmaani Raxiim “Al-xamdulilaahi, Wassalaatu Wasslaamu Calaa Rasuulillah”
Salaan qiimo badan kadib, waxaan bulshada reer Somaliland ee gudo iyo dibadba joogta, la jecelahay horumar, waxaanan ilaahay uga baryayaa in uu ka dul-qaado wixii dhib ah, iyo in uu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash.
Waxaan maanta jeclaystay, in aan dareenkayga idinla wadaago, waxaana hadalkaygu daarran-yahay maanta, markaan arkay sida dunidu inoogu soo qulqulayso iyo dedaalka Dawladdu waddo, iyo dadka buuqa iyo qaylada la taagan ama mucaaradada ka dhigtay cayda, habaarka iyo eedaymo aan macno lahayn oo saxaafada laysu mariyo.
Waxaan leeyahay, waar xanuunsan maayo oo Ilaahay mahaddii, dheg laygama hayo. Waar dhiman maayo maalinta ajashayda ka hor.
Waar kursiga cay kaga tagi maayo ee cod baan ku imi, maalinta codka layga helo ayuun baan bannaynayaa, waxaanan haystaa kalsoonida Bulshadii i dooratay.
Golaha Wakiillada waxaan kula dardaarmaya inay isu tanaasulaan, saxdaan wixii ka khaldan, iyagoo nidaamka iyo shuruucda raacaya oo ilaalinaya, arrinkooda hoos iyo wada hadal, haku dhamaystaan.